प्रदेश २ को सरकारमाथि खनिए प्रचण्ड
जनकपुरधाम – सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष प्रचण्डले प्रदेश नम्बर २ को सरकारले जनतालाई झन् दुख दिएको आरोप लगाएका छन् ।
सोमवार जनकपुरधामस्थित बरमझियामा शहीद रामवृक्ष यादवको स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले जनताले गरेको त्याग र बलिदान अनुसार प्रतिफल नपाएको गुनासो गरेका हुन् ।
'तपाईंहरूले गरेको त्याग र बलिदानी अनुसार के प्रतिफल पाउनुभएको छ ?' उनले प्रश्न गरे, '२ नम्बर प्रदेशको सरकारले के काम गरिरहेको छ, विकासले गति लिन थाल्यो त ? दुख र पीर मर्का पर्दा जनताको साथ दिएको छ त ?'
उनले भने, 'मैले बुझेसम्म त्यस्तो भएको छैन । भ्रष्टाचार बढेको छ, सुशासन छैन, जनतालाई झन् दुख परेको छ ।'
प्रचण्डले केही समयअघि प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्रीसहितको टोली काठमाडौं गएको र प्रधानमन्त्री बालुवाटारमा यस विषयमा छलफल पनि गरेको खुलासा गरे ।
'मुख्यमन्त्रीसहित नेताहरू काठमाडौं जानुभएको थियो,' उनले भने, 'म समेत बालुवाटारमा बसेर छलफल भएको थियो । तराई मधेशका जनता कसरी खुशी हुन्छन् भन्ने विषयमा कुराकानी भयो ।'
प्रचण्डलाई ओलीको प्रतिप्रश्न– त्यस्तो अल्सर लागेको भए किन उपचार गर्नुहुन्न ?